JESU akachema shamwari yake Razaro payakafa. Unofunga kuti Jehovha akarwadziwa here apo Jesu akatambura ndokuzofa?— Bhaibheri rinoti Mwari anogona ku‘nzwa shungu’ kunyange ‘kurwadziwa’ nezvinhu zvinoitika.—Pisarema 78:40, 41; Johani 11:35.
Unogona kufungidzira here marwadzo ayo Jehovha akanzwa sezvaakatarisa Mwanakomana wake anodiwa achifa?— Jesu akanga ane chokwadi chokuti Mwari aisazomukanganwa. Ndicho chikonzero nei mashoko ake okupedzisira asati afa aiva okuti: “Baba, ndinoisa [upenyu hwangu] mumaoko enyu.”—Ruka 23:46.
Jesu akanga ane chokwadi chokuti aizomutswa, uye kuti aisazosiyiwa “muhero,” kana kuti guva. Pashure pokunge Jesu amutswa, muapostora Petro akataura zvakanga zvakanyorwa muBhaibheri pamusoro paJesu achiti: “Mweya wake hauna kusiyiwa muHero, uyewo nyama yake haina kuona kuora.” (Mabasa 2:31, King James Version; Pisarema 16:10) Muviri waJesu hauna kumbova nenguva yokuora muguva, kureva kushata ndokutanga kunhuwa.
Jesu paakanga ari pasi pano, akatoudza vadzidzi vake kuti aisazoramba akafa kwenguva yakareba. Akavatsanangurira kuti aizo“urawa, uye ozomutswa pazuva rechitatu.” (Ruka 9:22) Saka, chaizvo vadzidzi vaisafanira kushamiswa pakamutswa Jesu. Asi vakashamiswa here?— Ngationei.
Dzava kuma3 masikati uri musi weChishanu apo Mudzidzisi Mukuru anofira padanda rokutambudzikira. Josefa, nhengo yeSanihedrini akapfuma, uyo anotendawo muna Jesu pachivande. Paanoziva kuti Jesu afa, anoenda kuna Pirato, gavhuna weRoma. Anokumbira kubvisa muviri waJesu padanda kuti anouviga. Pashure paizvozvo, Josefa anotakura muviri waJesu kuenda kubindu kune guva, uko kunoiswa vakafa.
Pashure pokunge muviri wacho waiswa muguva, dombo guru rinokungurutsirwa pamuromo peguva. Saka guva rinovharwa. Zvino rava zuva rechitatu, uri musi weSvondo. Zuva harisati rabuda, saka kuchakasviba. Vanhu varipo vakarinda guva. Vapristi vakuru ndivo vavatuma kuti varinde. Unoziva here kuti nei?—
Vapristi vakanga vanzwawo kuti Jesu akati aizomutswa. Naizvozvo kuti vadzidzi vake vasaba muviri wacho vozoti Jesu akamutswa, vapristi vanoita kuti paiswe varindi. Kamwe kamwe, pasi panotanga kudengenyeka. Chiedza chinopenya murima. Ingirozi yaJehovha! Varwi vacho vanotya zvokuti havakwanisi kufamba. Ngirozi yacho inoenda kuguva yobvisa dombo racho. Muguva hamuna chinhu!
Nei guva risina chinhu? Chii chakaitika?
Chokwadi, zvakaita seizvo muapostora Petro akazotaura kuti: “Uyu Jesu akamutswa naMwari.” (Mabasa 2:32) Mwari akamutsa Jesu ane muviri wakafanana nowaaiva nawo asati auya pasi pano. Akamutswa nomuviri womudzimu sowengirozi. (1 Petro 3:18) Naizvozvo kana vanhu vachizoona Jesu, anofanira kuzviitira muviri wenyama. Izvozvo ndizvo zvaanoita here?— Ngationei.
Zvino zuva rava kubuda. Varwi vaya vaenda. Mariya Magadharini nevamwe vakadzi vadzidzi vaJesu vari kuenda kuguva. Vari kutaurirana vachiti: ‘Ndiani achatibvisira zidombo riya?’ (Mako 16:3) Asi pavanosvika kuguva racho, dombo racho rabviswa kare. Uye muguva hamuna chinhu! Muviri waJesu wenyama usina upenyu waenda! Pakarepo, Mariya Magadharini anomhanya kunotsvaka vamwe vaapostora vaJesu.
Vamwe vakadzi vanosara paguva. Zvinovanetsa kuti: ‘Muviri waJesu waendepi chaizvo?’ Pakarepo varume vaviri vakapfeka nguo dzinopenya vanoonekwa. Ingirozi! Dzinoti kuvakadzi vacho: ‘Nei muri kutsvaka Jesu pano? Amutswa. Endai munoudza vadzidzi vake nokukurumidza.’ Unogona kufungidzira kuti vakadzi vacho vakamhanya zvakadini! Vari munzira, vanosangana nomumwe murume. Unoziva kuti ndiani here?—
NdiJesu, ane muviri wenyama! Anotiwo kuvakadzi vacho: ‘Endai munoudza vadzidzi vangu.’ Vakadzi vacho vanofara. Vanowana vadzidzi vacho vovaudza kuti: ‘Jesu mupenyu! Tamuona!’ Mariya atoudza Petro naJohani kuti muguva hamuna chinhu. Zvino vanoendako, sezvauri kuona pano. Vanotarisa machira akanga akaputira Jesu, asi havana chokwadi kuti vofunga zvipi. Vanoda kudavira kuti Jesu mupenyu zvekare, asi zvinoratidzika sezvakanyanyonakisa kuti zvive zvechokwadi.
Petro naJohani vangave vari kufungei?
Gare gare nomusi weSvondo iwoyo, Jesu anozviratidza kuvadzidzi vake vaviri vari kufamba nomugwagwa unoenda kumusha weEmausi. Jesu anofamba otaura navo, asi havamuzivi nokuti haana muviri wenyama uya sewaaiva nawo kare. Vanozomuziva pashure pokunge anyengetera nokudya navo. Vadzidzi vanofara kwazvo zvokuti vanomhanya kwemakiromita vachidzokera Jerusarema! Zvimwe inongova nguva pfupi pashure peizvi apo Jesu anozviratidza kuna Petro kuti aone kuti mupenyu.
Gare gare manheru eSvondo iyoyo vadzidzi vazhinji vakaungana mukamuri. Masuo akakiyiwa. Pakarepo Jesu anovamo mukamuri iroro navo! Zvino vava kuziva kuti zvechokwadi Mudzidzisi Mukuru mupenyu zvekare. Fungidzira kuti vari kufara zvakadini!—Mateu 28:1-15; Ruka 24:1-49; Johani 19:38–20:21.
Kwemazuva 40 anoonekwa ane miviri yakasiyana-siyana kuratidza vadzidzi vake kuti mupenyu. Ipapo anobva panyika odzokera kuna Baba vake vari kudenga. (Mabasa 1:9-11) Nguva pfupi kubva ipapo vadzidzi vanotanga kutaurira munhu wose kuti Mwari akamutsa Jesu kubva kuvakafa. Kunyange apo vapristi vanovarova nokuurayisa vamwe vavo, vanoramba vachiparidza. Vanoziva kuti kana vakafa, Mwari achavarangarira sokurangarira kwaakaita Mwanakomana wake.
Panguva yegore apo Jesu akamutswa, vazhinji vanofunga nezvei? Asi iwe unofunga nezvei?
Vateveri vaJesu vokutanga ivavo vakanga vakasiyana kwazvo nevanhu vazhinji nhasi! Vanhu ava vanongofunga nezvetsuro dzeIsita nemazai eIsita ane mavara panguva yegore apo Jesu akamutswa. Asi Bhaibheri harimbotauri chero chinhu pamusoro petsuro nemazai zveIsita. Rinotaura nezvokushumira Mwari.
Tinogona kufanana nevadzidzi vaJesu nokuudza vanhu kuti Mwari akaita chinhu chinoshamisa paakamutsa Mwanakomana wake. Hatifaniri kumbotya, kunyange kana vanhu vakati vachatiuraya. Kana tikafa, Jehovha achatirangarira otimutsa, sezvaakangoita Jesu.
Hatifari here kuziva kuti Mwari anoyeuka vanomushumira uye achatovamutsa kuvakafa?— Kuziva zvinhu izvi kunofanira kutiita kuti tide kuziva kuti tingafadza sei Mwari. Waizviziva here kuti tinogona chaizvo?— Ngatizotaura pamusoro paizvozvo.
Kudavira murumuko rwaJesu kunofanira kusimbisa tariro yedu nokutenda kwedu. Tapota verenga Mabasa 2:22-36; 4:18-20; na1 VaKorinde 15:3-8, 20-23.